ငြိမ်းဝေ: ဘုရားသခင်ချီးမြှင့်တဲ့လူတိုင်းအတွက် ဖားတကောင်
ဂျပန်ဟိုက္ကူကဗျာဆရာကြီး “ဗသျှိုး” ရဲ့ အထင်ရှားဆုံးကဗျာတပုဒ်ကို ဒီကနေ့ ကျနော် မိတ်ဆက်ပေးပါ့မယ်။ (တချို့လည်း ဖတ်ဖူးနေလောက်ရောပေါ့)
“ဗသျှိုး” မှာ အထင်ရှားဆုံးစကားပြေတခုနဲ့ အထင်ရှားဆုံးကဗျာတပုဒ်ရှိပါတယ်။ အထင်ရှားဆုံးစကားပြေကတော့ “မြောက်ဖက်အရပ်ဆီသွားတဲ့ လမ်းကျဉ်းကလေး” ဆိုတဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းပါ။ အထင်ရှားဆုံးကဗျာကတော့ ဒီကနေ့ ကျနော်တင်တဲ့ ကဗျာပါ။
“ဗသျှိုး” ရဲ့ အဲဒီ ဟိုက္ကူကဗျာကို မိတ်ဆက်ပေးဖို့လုပ်တော့ ကျနော် ပထမဆုံးရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာကတော့ “ဘာသာပြန်မူကွဲ” ကိစ္စပါ။ ဒီကဗျာက လူမျိုးပေါင်းစုံက ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ ထုတ်ဝေကြပြီး ဖြစ်ပေမယ့် အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်မူလိုတော့ မူကွဲတွေများမယ်လို့ ကျနော်မထင်ဘူး။ ဒီကဗျာကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ဆိုသူတွေ များတော့ ဘာသာပြန်မူကွဲတွေ များတော့တာပေါ့။ ဒီတော့ကာ ဘယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မူကို ယူပြီးမှ မြန်မာ ဘာသာပြန်ရမလဲဆိုတာ ကျနော့်အဖို့ မဟာအခက်အခဲကြီးပေါ့။ ဒါနဲ့ပဲ မြန်မာဘာသာပြန်အမှန်ဆုံးဖြစ်အောင် အချိန်တော်တော်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဂျပန်လိုရေးထားတဲ့ကဗျာကို ဂျပန်မိတ်ဆွေတချို့ကို တွေ့တိုင်း ပြကြည့်ရ မေးကြည့်ရတော့တာပေါ့။ ဒါလည်း သိပ်ပြီးအဆင်မပြေပါဘူး။ ကျနော်နဲ့တွေ့တဲ့ သိတဲ့ ဂျပန်တွေကလည်း အဲဒီ ကဗျာလေးကို သိပေမယ့် သိပ်ပြီး ကျနော် ကျေနပ်အောင် ရှင်းမပြနိုင်ကြပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ ကိုယ့်မှာရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ် ဘာသာပြန်မူကွဲတချို့ရယ်၊ ကိုယ်ဖတ်ထား သိထားတာရယ်၊ မေးမြန်းလို့ရတဲ့ အချက်အလက်တွေကို စုပြီး အဓိကအကြောင်းအရာမလွတ်တဲ့ မြန်မာဘာသာပြန်ကဗျာတပုဒ်လုပ်ရတော့တာပေါ့။ ဟောဒီမှာ ကျနော့်ဆီမှာ ရှိတဲ့ အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်မူကွဲတချို့ ... ။
(ဒါက lucien Stryk ဘာသာပြန်ထားတာပါ။)
An old silent pond ...
a frog jumps,
splash! silence again
(ဒါက Peter Beilenson နဲ့ Harry Behn တို့ ဘာသာပြန်ထားတာ။)
(ဒါက Stephen Addiss ဘာသာပြန်တာ။)
မြန်မာစာရေးဆရာကြီး မောင်သာနိူးကတော့ အခုလိုပဲ မြန်မာမှုပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ဆရာမောင်သာနိူးက ဟိုက္ကူကဗျာဖွဲ့စည်းပုံ ၅.၇.၅ ကို ရအောင်ယူပြီး ဘာသာပြန်ထားတာပါ။ ဒီကဗျာကို ဆရာကြီး မင်းသုဝဏ်လည်း ဘာသာပြန်တယ်လို့ ကြားရပါတယ်။ အခုထက်ထိ ကျနော် ဖတ်ခွင့်မကြုံသေးလို့ ၀မ်းနည်းမိတယ်။ အခု ... ကျနော် မြန်မာမှုပြုထားတဲ့ ကဗျာလေး ... ။
(ချရေးပြီးမှ ပြန်ဖတ်ကြည့်တော့ ၅.၇.၅. ပုံစံထဲ ကွက်တိဝင်နေတာတွေ့ရလို့ ကျနော့်မှာ ပြောမပြနိုင်လောက် အောင် ၀မ်းသာသွားရပါတယ်။)
ဟိုက္ကူကဗျာကိုဖတ်ရင် ဒီကနေ့ ပြောနေဆိုနေကြတဲ့ ကဗျာအနုပဋိကိစ္စနဲ့ ဆင်တူတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ငြင်းကြခုန်ကြတဲ့ အထဲမှာ၊ ခေတ်ပေါ်ကဗျာတပုဒ်ကို နားလည်ခံစားတတ်ဖို့ ဆိုရင် ကဗျာဖတ်သူကလည်း ကဗျာရေးသူရဲ့အလုပ်ကို တ၀က်ဝင်လုပ်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စကားရှိပါတယ်။ ကဗျာဖတ်သူဖက်က အင်မတန်ခံစားမှုခွန်အားမြှင့်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဟိုက္ကူကဗျာကြတော့ ခေတ်ပေါ်ကဗျာ ထက်တောင်မှ ပိုမလားပဲ။ သူ့ကြတော့ ကဗျာဖတ်သူဖက်က ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းခန့်အထိ အတွေးကို မြှင့်ပြီး ဖတ်ဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာပြုလို့လည်းဆိုတော့ ကဗျာဆရာက ကဗျာကပေးတဲ့ ရသကို ဗဟုဝုဒ်သဘော ပေးခဲ့တာဖြစ်သလို၊ သူပေးတဲ့ သူဖော်ပြတဲ့ ပြချက်ပြကွက်အပေါ်မှာလည်း သူကိုယ်တိုင်က ဘယ်လိုအရိပ်အယောင်မျှ သဘောထား မပြတော့ပဲ၊ ကဗျာဖတ်သူအတွက် လုံးလုံးကြီးချန်ထားခဲ့တဲ့သဘော ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဟိုက္ကူကဗျာတပုဒ်ကိုဖတ်ရင် ပထမဦးဆုံးတွေ့ရမယ့်အချက်က ကာလနဲ့ဒေသတခုခုကို တွေ့ရမယ်။ ပြီးတော့ ပြချက်တခု၊ မြင်ကွင်းတခု၊ ဒါက ကဗျာဖတ်သူကို အဖုံးတ၀က်လှပ်ပြလိုက်တဲ့ သဘောပဲ။ ဒါတောင်မှ ကဗျာဆရာက ကြာကြာမပြဘူး။ လျှပ်တပျက်သဘောပဲ။ တချက်ထဲပဲ။ အဖုံးကို ပြန်ပိတ်လိုက်တာပဲ။ ကဗျာဖတ်သူက သူမြင်လိုက်ရတဲ့၊ သူကြားလိုက်ရတဲ့၊ သူထိတွေ့လိုက်ရတဲ့ ကာလ၊ ဒေသ၊ ပြချက်အပေါ် မူတည်ပြီး တွေးလေရော့ပဲ။ တွေးလေ ... တွေးတတ်လေ၊ တွေးနိုင်လေ ... ရင်ခုန်ပေရော့ပဲ။
ဟိုက္ကူကဗျာဆိုတာ ခံစားမှုအများကြီးရှိရာကို နည်းပေါင်းစုံသုံးပြီး ရောက်အောင်သွားနိုင်အောင်၊ အဲဒီသွားနိုင်တဲ့ လမ်းဟူသမျှ သမ္ဘာရနည်းနဲ့ ကျစ်နေအောင်စုစည်းထားတဲ့ အနုပညာပစ္စည်းတခုပါပဲ။ ဥပမာတခုပြောရရင် ကျနော်က “ရေကန်အို” ကို ကျနော့်ဘ၀လို့ ယူဆမယ်၊ “ဖားကလေးတကောင်” က ကျနော့်ဘ၀ကို လာရောက် လှုပ်ခတ်လိုက်တဲ့ ပယေါဂ တခုခုဆိုပါစို့။ ဒီတော့ ရေပွက်သံကြားရမယ်၊ ဂယက်ထမယ်၊ ဒါတွေက ပယေါဂကြောင့် ကျနော့်ဘ၀အနေအထား တစုံတရာလှုပ်ရှားယိမ်းခါသွားတဲ့သဘော ...။ ဒီလို ယူဆရင် ဘယ်လို ပယေါဂလည်း ဘယ်လိုဂယက်တွေလည်း ဆက်တွေးလို့ရပါတယ်။ ဖြန့်ကျက်ပြီး စဉ်းစားလို့်ရပါတယ်။
ရေကန်ထဲ ဖားတကောင်ခုန်ဆင်းတဲ့ ဒီကဗျာလေးအကြောင်း ဋီကာဖွင့်ကြတာတွေကတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ ကျနော်ကတော့ လိုက်ဖတ်ကြည့်ပြီး ယူတော့ကိုယ့်ဘ၀နဲ့ပဲ ကိုက်ညှိပြီးယူပါတယ်။ ဆိုပါတော့ မနေ့တနေ့ကပဲ မဲဆောက်မြို့ဈေးထဲမှာ ဈေးလာဝယ်တဲ့ သူတွေထဲမှာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်ဆယ်လောက်က သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အသိတယောက်နဲ့ တွေ့လိုက်လို့ ကျနော့်မှာ တော်တော်လေး စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ ကျနော့်ရေကန်ထဲ ဖားတကောင်ခုန်ချလို့ဖြစ်သွားတဲ့ ဂယက်ပဲပေါ့။
နိဂုံးချုပ်ရရင် ဟိုက္ကူကဗျာဆိုတာ အရိပ်ကိုပဲ ပြတာပါ။ အကောင်အထည်ကို စာဖတ်သူက တူးယူပေတော့ပေါ့။ ပြီးတော့ သူက လျပ်တပျက်တကွက်ပဲပြတဲ့သဘော။ စာဖတ်သူက အချိန်မီမိအောင်သာ ဖမ်းဆုပ်ပေတော့ပေါ့။ ပြီးတော့ ဟိုက္ကူကဗျာထဲမှာပါတဲ့ ရာသီပြစကားလုံး၊ ပြကွက်တခုဆိုတဲ့သူရဲ့ အခြေခံအင်္ဂါရပ်ကို ရှာကြည့်ရတာ လည်း ပျော်စရာပါ။
ကျနော်ကတော့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကိုဖတ်ရရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဖြူစင်အောင် လျှော်ဖွတ်နေမိသလိုလည်း ခံစားရတယ်။ သွက်လက်ပေါ့ပါးရတယ်။ ရိုးဂုဏ်နဲ့အကြည်ဓါတ်ကို ခပ်ယူသောက်သုံးခွင့်ရတယ်။ သန္တိသုခအနားကို ရောက်တယ်လို့ယူဆတယ်။ လူတွေကို ပိုပြီး ချစ်ဖို့၊ သဘာဝပါတ်ဝန်းကျင်ကို ပိုပြီးချစ်ဖို့၊ ကမ္ဘာကြီးကို ပိုပြီးချစ်ဖို့၊ ချစ်ဖို့ဆိုတာ တုတ်နှောင်တဲ့အချစ်မျိုး မဟုတ်ဘူးနော် ...။ ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတဲ့ အချစ်၊ မေတ္တာမျိုး။ ဒါကြောင့်မို့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို ကျနော် သွားလေရာ သယ်ပိုးနေခဲ့မိတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။
ဒီစာကိုရေးနေတဲ့ တချိန်ထဲမှာပဲ ဆရာလေးကိုပေါတို့၊ ဆရာမလေး နိုင်းနိုင်းစနေတို့ စလုံးအကြောင်း ပြောကြဆိုကြတာ ဖတ်ခဲ့ရတာတွေ ဒီကနေ့မှ ဖတ်ရတဲ့ ဆရာလေးညိမ်းညိုရဲ့ ကဗျာတွေဟာ ကျနော့်အတွက် လတ်တလော ဘုရားသခင်က လက်ဆောင်ပေးလိုက်တဲ့ “ဖားကလေး” တွေပေါ့ဗျာ။ သူတို့ကို ကျေးဇူးတင်မိ ပါတယ်။ သူတို့လည်းပဲ “ဖားတကောင်” ကိုယ်စီရပြီးရင် သူတို့ဘ၀ ရေကန်မျက်နှာပြင်လေးတွေ ပြန်လည် ငြိမ်သက်တည်ငြိမ်နိုင်ကြပါစေလို့ ကျနော် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ငြိမ်းဝေ at 7:21 PM
Labels: နိုင်ငံတကာကဗျာ မိတ်ဆက်, နိုင်ငံတကာ ကဗျာမိတ်ဆက်
wai lin tun August 12, 2008 at 4:20 AM
ဟိုက္ကူကဗျာ ချစ်စရာ မှာ ဆရာမင်းသုဝဏ်က ဒီကဗျာကို
ပလုံမြည်သံကြား လို့ ဘာသာပြန်ခဲ့တာကို ဖတ်ခဲ့မှတ်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆရာက ကျိုတိုတက္ကသိုလ် မြန်မာစာဌာနမှာ အလုပ်လုပ်ရာက အပြန်မှာ ရေးခဲ့တာမို့ ဂျပန်ဘာသာမူရင်းနဲ့ တိုက်ဆိုင်ပြန်ဆိုခဲ့တာလည်း ဖြစ်နိုင်ဖွယ် ရှိပါတယ်။
ကျနော်လည်း ဒီကဗျာလေးကို သိပ်ကြိုက်မိခဲ့ပါကြောင်း.။
pandora August 12, 2008 at 4:47 AM
pandora August 12, 2008 at 4:52 AM
ကျနော့် သူငယ်ချင်းလေး တစ်ယောက် ပို့စ်ထဲမှာတော့ အင်္ဂလိပ်လို ပြန်တာနဲ့ မြန်မာလိုပြန်တာတချို့ ရေးထားခဲ့တယ်ဗျ။ တာရာမင်းဝေက အောက်မှာ ရေးထားသလို ဘာသာပြန်ခဲ့တယ် ဆိုပဲ။
ငြိမ်းဝေ August 12, 2008 at 8:20 PM
ကျနော်မဖတ်ဖူးဘူး။ ကြားပဲ ကြားဖူးခဲ့တာ။
ကျနော်ဖတ်ဖူးပြီး ဘယ်သူဘာသာပြန်တာလဲဆိုတာ ပြီးတော့ စကားလုံးတချို့ မှားပြီး မှတ်မိနေသလားဆိုတာ မသေချာလို့ ထည့်မရေးပဲ ချန်ထားလိုက်ရတဲ့ မြန်မာဘာသာတခု ရှိသေးတယ်။ ခင်ဗျားဖတ်ကြည့်။ အရမ်းသဘောကျသွားမှာ သေချာတယ်။
ခင်ဗျား ထောက်ပြတာ ကျေးဇူးတင်တယ်။ ကျနော်ကတော့ ခင်ဗျားရဲ့ “တိမ်တွေပျော်တဲ့ မြို့ကလေး” ကဗျာကို မှီအောင် ကြိုးစားနေတုန်း...။
ခင်ဗျားဖတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ခင်ဗျားသူငယ်ချင်းရဲ့ ပို့စ်တခုဆိုတာ ပြောပြလို့ရမလား။ ကျနော်သွားဖတ်ကြည့်ချင်တယ်။ တာရာမင်းဝေ ဘာသာပြန်တာကို မှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ။
Anonymous August 15, 2008 at 6:34 AM
ဖားကလေး ဟိုက္ကူကို ဦးလေးနားလည်တဲ့ပုံစံ ရှင်းပြထားတာ အရမ်းအထောက်အကူဖြစ်တယ် ။ အဲဒါဖတ်ပြီး ကျန်တဲ့ ဟိုက္ကူကဗျာတွေကို ပို appreciate ဖြစ်သွားစေပါတယ် ။ နောက်ထပ် ဘာသာပြန်ထားတာတွေကိုလည်း စောင့်ဖတ်နေပါတယ် ။
pandora August 15, 2008 at 7:39 AM
လင့်ခ်က ဒီမှာပါ ဆရာ။ အပေါ်ကွန်မန့်မှာလည်း ရေးထားပါတယ်။